Ny toetra tsara dia manampy amin'ny fametrahana elanelana misy eo amin'ny fahaizana sy ny filana. - Anony - Quote Pedia
Samy tahian-tsoa isika rehetra samy hafa fahaizana sy talenta isan-karazany. Rehefa mihalehibe isika dia iharihary amin'ireo safidy isan-karazany azontsika nofidina amin'ny famolavolana ny fiainantsika ary miadana miadana ny nofinofinay manokana isika.
Ireo nofinofy ireo dia lasa fitiavantsika rehefa manomboka ny fanatanterahana azy ireo. Manjary lasa maniry sy finiavana isika. Alohan'ny hifidianana izay enjehintsika dia tokony handinika tsara izay enjehintsika isika. Indray mandeha, nametraka ny masontsika tamin'ny nofinofy isika, dia tsy maintsy miorina mafy ary mifantoka.
Ho hitantsika fa ny fanamby samihafa dia ho tonga amintsika, amin'ny zava-drehetra, ny zava-dehibe indrindra dia ny mitazona fihetsika tsara. Ho tsapanao fa rehefa mihalehibe ianao dia ny fisainanao ihany no mamonjy anao. Manampy anao handramana izay rehetra natahoranao azy.
Ho tafintohina amin'ny tenanao ianao amin'ny fahazoana hery tsara. Raiso ny tsy fahombiazan'ny dingana ataonao ary mitadiava ny tenanao mba handresena ny tsy fahombiazanao. Amin'izany fomba izany dia ho hitanao fa manakaiky ny nofinofinao.
Rehefa miatrika zava-tsarotra sy mizotra ianao dia hahita fa ho afaka hanome aingam-panahy ny hafa koa ianao. Ho afaka hanangana ny hantsana eo anelanelan'ny fahaizanao sy ny fanirianao ianao. Midika izany fa mitady vahaolana sy tanjaka hanala ny fetranao ary hanome izay tsara indrindra anananao.
Avy amin'ny fananganana toe-tsaina tsara izany. Raha tsy mety ianao ary manafoana ny vokatr'izany, dia hialanao ary hampifantoka ny herinao amin'ny zavatra izay tsy hahasakana anao fotsiny. Noho izany, Manodidina ny fahitanao, matoky tena, ary mandroso amin'ny fikatsahanao ny fanatratraranao.
Fiheverana ny fihetsika
Fihetseham-po tsara indrindra
Fiheverana toetra tsara
Fiheveram-panahy amin'ny tarika
Teny momba ny fihetsika
Teny momba ny fahatsorana sy ny fihetsika
Teny momba ny toe-tsaina mandresy
Teny fohy momba ny toe-tsaina
Malaky dia mitsara ny hafa ny fahadisoan'ny olona, ​​fa tsy haingana hanondro ny azy. - Anonyme
Malaky dia mitsara ny hafa ny fahadisoan'ny olona, ​​fa tsy haingana hanondro ny azy. - Anony…
Indraindray mamela heloka ny olona ianao satria mbola maniry azy ireo amin'ny fiainanao. - Anonyme
Ny olona mifankahazo dia tena fitahiana tokoa. Renay ny olona rehefa avy tao…
Tsy manelingelina ny fahatsapana rehefa irery ianao. Mahatsiaro ho irery ny manirery rehefa tsy misy mikarakara. - Anonyme
Tsy manelingelina ny fahatsapana rehefa irery ianao. Mahatsiaro ho irery ny manirery rehefa tsy misy mikarakara. - ...